ဝါးခယ်မ : ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် ၁၀၀ ထဲက မြန်မာလူမျိုး ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာစောဝေလှ
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် ၁၀၀ ထဲက မြန်မာလူမျိုး ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာစောဝေလှ
ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြင့် မာစတာဆက်တတ်သည် ။ ကျောင်းသားဘ၀ မှာပဲ ဂစ်တာ က လွတ်လွတ်လပ်လပ်တီးခွင့်ရှိမည် မဟုတ်လား ။မာစတာတက်ရင်း ဂစ်တာတီးသည် ။ လီယိုဝိုင်းတော်သားများဖြင့် ပွဲတော်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။
ဂစ်တာသမားစောဝေလှ မှ ကမ္ဘာကျော်သိပ္ဖံပညာရှင် စောဝေလှ ဖြစ်ခဲ့ပြီ ။
အမေရိကန်ရဲ့ တက္ကသိုလ်အားလုံးက အဆင့်ဆင့်သောပရော်ဖက်ဆာတွေအားလုံးဟာ အင်ဒီပန်းဒန့် လွတ်လပ်သူတွေပဲ
ကျွန်တော်တို့ဆီက တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ဆေးကောလိပ်ပါတယ် ။ နည်းပညာကောလိပ်ပါတယ် ။ အခြားအသက်မွေးကောလိပ်တွေပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေရှိတယ် ။ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ကွင်းတွေ . ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်တွေရှိတယ်
ဋ္ဌပြည်လမ်းပေါ်ရောက်တော့ တက္ကစီသမားက ဆက်မသွားရဲတော့ဘူး ။ ရှေ့မှာက ပြိုင်ကားတွေ ကိုးစီးလောက်ရှိတယ် ။
ကျွန်တော် သိပ္ဖံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ဗီဇ ၊ ၀ါသနာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သုံးသပ်ရရင် ကျွန်တော်က ဗီဇ ကြောင့်လို့ပဲ ယူဆတယ် ။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 1:22 PM
Labels: ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာပြည်မြန်မာ, ဗဟုသုတဆိုင်ရာများ
၂၀၁၇ ၀ါးခယ်မသင်္ကြန် - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ - ၁၃၇၉
​ရွှေခယ်​သင်္ကြန်​ကိုတရက်​တိုး​စေခဲ့ကြသူများ - မြင့်...
ငှက်လွှတ်တာ ကုသိုလ် နဲ. အကုသိုလ် ဘယ်ဟာပိုမလဲ
ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် ၁၀၀ ထဲက မြန်မာလူမျိုး ...